Iyi ndiyo Meizu PRO 5 Ubuntu Edition | Linux Vakapindwa muropa
Iyo yepamusoro-yekupedzisira foni Meizu PRO 5 Ubuntu Edition ikozvino yave kutengeswa. Chero nyika yatakabva, tinogona kuitenga ne $ 370 chete.
Vagadziri vanoramba vachiburitsa nharembozha ine Ubuntu Kubata yakaiswa. Vokupedzisira kuenda anga ari iye ane simba Meizu PRO 5, foni inoonekwa yakakwira-kumagumo iyo yakave nekuita kwakanaka kwazvo mushanduro yayo yeApple, tichaona izvozvi kuti ndiyo vhezheni yayo yeUbuntu.
Iko kubuda kweiyi terminal chikamu chekubatana pakati paMeizu neCanonical kuwana zviteshi neUbuntu Kubata inoshanda sisitimu. Meizu anga aburitsawo MX4 Ubuntu Edition rinenge gore rimwe rapfuura.
Isu hatishevedze Meizu PRO 5 yepamusoro-magumo pasina, nekuti ine epamberi maficha senge 3 GB yeRam Memory, 8 GHz 2,1-musimboti processor, 5,7-inch Yakazara HD skrini, 21 megapixel main kamera uye 5 megapixel yekumberi kamera.
Iyo zvakare ine makumi maviri nemaviri maGigabyte emukati ekurangarira anowedzeredzwa neiyo Micro SD, 32G tekinoroji, anopfuura 4 mamirioni emamita ebhatiri uye Mali T670 GPU izvo zvinokutendera iwe kumhanya mitambo pasina dambudziko.
Nhau dzakanakisa ndedzekuti chero kwaunobva, Unogona kutenga ino terminal nemazana matatu nemakumi matatu emadhora. Vaya imi munofunga kuti mutengo unodhura kwazvo, fungai kuti mamwe ma terminals akafanana kubva kune mamwe mabhenji akadai seHuawei anopa maTerminal ane hunhu hwakaenzana nekaviri mutengo (uye kana tikataura nezveSamsung uye nekambani mutengo unokwira kumusoro).
Pasina kupokana, iyo Meixu PRO 5 ndeyekutenga kwakanaka kwezhizha rino, nekuti iwe unogona kuwana imwe terminal uye kusvika parizvino Ubuntu Touch terminal ine simba padhuze neOne Plus mobiles.
Zvekutenga link, tinya apa kuwana peji rinoitengesa. Ngarava pasirese, saka chero kwaunobva, unogona kuitenga nekutumira mahara.
Ini ndinonzwisisa kuti zvine njodzi kutenga Ubuntu terminals, nekuti haina akawanda mashandisiro seAroid. Kunyange zvakadaro, kurudziro yekutenga nharembozha neUbuntu ndiko kusangana, sezvo iri yepamusoro system yekushandisa pane iyi nyaya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyi ndiyo Meizu PRO 5 Ubuntu Edition
Yekutanga alpha vhezheni yeUbuntu 16.10 inosunungurwa